Iindaba -Ukonyusa iindleko kunye neenzuzo ezingonelanga, amaxabiso e-graphite electrode kusalindeleke ukuba anyuke.
Ukunyusa iindleko kunye neenzuzo ezingonelanga, amaxabiso e-graphite electrode kulindeleke ukuba anyuke.
Isishwankathelo sentengiso: Amaxabiso entengiso ye-electrode e-graphite ahlala ezinzile kule veki. Kule veki, ixabiso le-coke ye-sulphur e-sulphur encinci, izinto ezingasentla zokwenza izinto ze-graphite electrode, iyekile ukuwa kwaye yazinza. Ifuthe elibi kumphezulu wempahla eluhlaza ye-graphite buthathaka, kwaye isimo sengqondo sokulinda nokubona kwimarike ye-graphite electrode yehle kancinci. Phantsi koxinzelelo lwamaxabiso aphezulu e-coke yenaliti kunye ne-pitch yamalahle, ezizizinto ezingafunekiyo ze-graphite electrode, uninzi lweenkampani eziphambili ze-graphite electrode ziye zaqinisa iikowuti zazo. Ukongeza, kule veki i-graphite electrode esezantsi kwentsimbi yombane yentsimbi isagcina inqanaba eliphezulu lokusebenza, kwaye i-graphite electrode ifuna nje ukuzinza. Uninzi lweenkampani eziphambili ze-graphite electrode zikwathi ukuthunyelwa kwenkampani kuzinzile. Kuyabonakala ukuba i-graphite electrode yecala elifunekayo lenkxaso isekhona.
Ukubonelela: Imakethi yegraphite ye-electrode igcine ukubonelelwa okuxineneyo kule veki. Kule veki, unikezelo lwee-electrode ze-graphite ezincinci kunye namandla aphakathi kwimakethi ye-graphite electrode iqhubekile nokuba ngqinayo. Esona sizathu kukuba iinkampani ze-graphite electrode eziqhelekileyo zivelisa ii-electrode eziphezulu kakhulu zamandla amakhulu kunye nobukhulu obukhulu. I-akhawunti ye-electrode ye-graphite encinci naphakathi nendawo yesabelo esincinci semveliso, kwaye ngenxa yokusetyenziswa kwemfuno esezantsi, uluhlu lweemarike alufumaneki. Ngokunyuka, ukubonelelwa kwee-electrode ze-graphite ezincinci kunye neziphakathi kusaxinekile.
Icala lokufuna: Icala lemfuno yentengiso yegraphite ye-electrode igcine intsebenzo elungileyo kule veki. Kule veki, inqanaba lokusebenza kweziko lesinyithi leziko lombane laseTshayina lahlala kwinqanaba eliphezulu. Ngenkxaso yemfuno engqongqo, uvakalelo ekuthengweni kwee-electrode zegraphite lwalulungile. Ukongeza, ngokwempendulo evela kwiinkampani ze-graphite electrode, nangona inqanaba lothutho lweenqanawa zokuthumela ngaphandle lihleli kwinqanaba eliphezulu kutsha nje, ubonelelo oluqinileyo lweenqanawa zokuthumela ngaphandle luye lwancipha, kunye nokusebenza kukonke kokuthunyelwa ngaphandle kwegraphite electrode kuye kwaphucuka.
Ngokwendleko: Iindleko zee-electrode ze-graphite zibonise ukwanda okunyukayo kule veki. Ixabiso le-coke ye-petroleum ephantsi ye-sulphur iyekile ukuwa kwaye yazinza kule veki, kwaye ifuthe elibi kumphezulu wempahla yegraphite ye-graphite yenziwa buthathaka; Ixabiso le-coke yenaliti lihleli liphezulu kule veki, amaxabiso e-pitch yamalahle aqhubekile nokunyuka, kwaye iindleko zee-electrode ze-graphite bezisenyuka.
Ngokwenzuzo: Inzuzo iyonke yemakethi ye-graphite electrode ayisonelanga kule veki. Ixabiso lemarike le-electrode ye-graphite liqhubekile ngokuzinzileyo kutshanje, kwaye ukunyuka kweendleko kusanyanzela umda wenzuzo kwimakethi ye-graphite electrode.
Ngokwempahla: Akukho nto iqokelelweyo yoluhlu kwimarike ye-graphite electrode kule veki. Kule veki, uninzi lweenkampani ze-graphite electrode zinemveliso ezinzileyo, kwaye imfuno esezantsi ye-electrite ye-graphite izinzile, kwaye akukho kuqokelelwa kwe-inventri egqithileyo kwintengiso. Ezinye iinkampani eziqhelekileyo ze-graphite electrode zibonise ukuba ziya kugcina uluhlu lwempahla eqhelekileyo, kwaye ezinye iinkampani ze-electrode ze-graphite ezincinci neziphakathi zibonise ukuba inkampani ayinalo uluhlu lwezinto.
Uqikelelo lwe-Outlook: Ixabiso lemarike ye-electrode ye-graphite lihleli liphezulu kule veki, kwaye ixabiso le-coke ye-sulphur ye-sulphur lizinzile, kwaye iindleko zenkxaso ye-graphite electrode ziya kunyuka. Kwimeko yokuba inzuzo iyonke yemakethi ye-graphite electrode ayonelanga, ixabiso lentengiso yegraphite ye-electrode isenakho ukutyhala, kwaye kulindeleke ukuba inyuke nge-1,000 yuan / ngetoni.
Ixesha Post: Jun-08-2021